Ch 9 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 9 Luke
9:1 Ary niantso ny roa ambin'ny folo lahy miara-Apôstôly, dia nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina.
9:2 Ary Izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary.
9:3 Ary hoy Izy taminy:: "Ianareo mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny halehany, na tehina, na dia lavitra kitapo, na mofo, na vola; ary tsy tokony hanana mitondra akanjo roa.
9:4 Ary Ary izay trano no hiditra, handry any, ary aza miala avy teo.
9:5 Ary na iza na iza no tsy efa nandray anao, eo niala ny tanàna, dia ahintsano ny vovoka amin'ny tongotrareo, ho vavolombelona aminy. "
9:6 Ary nivoaka, dia nandeha manodidina, ny alalan 'ny tanàna, filazantsara ary nanasitrana na aiza na aiza.
9:7 Ary Heroda mpanapaka nandre ny zavatra rehetra izay efa nataony, fa nisalasala, satria voalaza hoe:
9:8 ny sasany, "Fa Jaona efa nitsangana tamin'ny maty,"Mbola tena, ny hafa, "Fa Elia efa niseho,"Ary mbola olon-kafa, "Fa anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa hatramin'ny efa nitsangana."
9:9 Fa hoy Heroda:: "I hanapaka ny lohan'i Jaona. Koa dia, iza io, izay reko fa manao izany zavatra izany?"Ary izy nitady hahita Azy.
9:10 Ary rehefa niverina ny Apôstôly, dia nanazava taminy ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary nitondra azy ho any aminy, dia lasa tany amin'ny toerana mitokana efitra, izay an'i Betsaida.
9:11 Ary nony efa tonga saina ny vahoaka izany, dia nanaraka an'i Jesosy. Ary izy nandray azy ka nilaza taminy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ireo izay nila fanasitranana, dia nahasitrana.
9:12 Ary ny andro nanomboka mandà. Ka nanakaiky, ny roa ambin'ny folo lahy nanao taminy hoe:: "Nandrava ny vahoaka, amin'izay mba, amin'ny alalan'ny hivarina any an-tanàn-dehibe sy tanàna kely manodidina, mba hanavaka sy hahita sakafo. Fa izahay atỳ an-toerana foana. "
9:13 Fa hoy Izy taminy:, "Omeo zavatra hohanina izy." Ary hoy izy ireo:, "Tsy momba antsika intsony noho ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, angamba isika raha tsy handeha hividy hanina ho vahoaka iray manontolo izany. "
9:14 Ary nisy tokony ho dimy arivo lahy. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, "Asaivo mandry ilika hihinana ao amin'ny vondrona ny dimam-polo."
9:15 Dia nataon'ny olona izany. Ary nampandeha azy rehetra mba nipetraka teny hihinana.
9:16 Avy eo, nandray ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia nandinika ny lanitra, Dia nitso-drano dia novakiny ka nizara azy ireo ny mpianany, mba napetrany teo anatrehan'ny vahoaka.
9:17 Dia nihinana izy rehetra ka voky. Ary ny roa ambin'ny folo harona no sombintsombiny no nakarina, izay sisa avy aminy.
9:18 Ary nony fa, raha mbola nivavaka Izy irery, ny mpianatra koa niaraka taminy, ary izy nanontany azy, nanao hoe:: "Iza no milaza fa ny vahoaka aho?"
9:19 Fa izy namaly tamin'ny hoe:: "Jaona Mpanao-batisa. Fa ny sasany: Elia. Na izany aza tena, ny hafa milaza fa anankiray amin'ny mpaminany tsy ho eo anoloan'ny efa nitsangana indray. "
9:20 Dia hoy izy taminy, "Fa iza no milaza fa Izaho no?"Ho valin'izany, Simona Petera nanao hoe:, "Ny Kristin'Andriamanitra."
9:21 Fa niteny mafy azy ireo, Nandidy azy ireo izy tsy mba tsy hilazalaza izany na iza na iza,
9:22 nanao hoe:, "Fa ny Zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy, ka holavin'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, ka hovonoina ho faty, ary amin'ny andro fahatelo hitsangana indray Izy. "
9:23 Dia hoy izy rehetra: "Raha misy vonona ny hanaraka Ahy: aoka izy handà ny tenany, ary hitondra ny hazo fijaliany isan-andro, ka hanaraka Ahy.
9:24 Fa na iza na iza no efa namonjy ny ainy, dia hahavery izany;. Kanefa na iza na iza no namoy ny ainy noho ny amiko, dia hamonjy izany.
9:25 Fa inona no soa ny olona, raha dia mba mahazo izao tontolo izao, nefa kanefa very ny ainy, na mahatonga ny tenany ratsy?
9:26 Fa na iza na iza no ho menatra Ahy sy ny teniko: azy ny Zanak'olona, ​​dia ho menatra, rehefa ho efa tonga tany ny fahalehibiazany sy ny an'ny Rainy ary ny an'ny anjely masina.
9:27 Kanefa, Lazaiko aminareo marina tokoa: Misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana, mandra-pahitany ny fanjakan'Andriamanitra. "
9:28 Ary nony fa, tokony ho havaloana taorian'izany teny izany, dia nitondra an'i Petera sy Jakoba sy Jaona, Ary niakatra teo an-tendrombohitra, ka mba hivavaka.
9:29 Ary raha mbola nivavaka Izy, ny endriky ny tarehiny niova ny toetry, ary ny vestment dia tonga fotsy sady nanelatrelatra.
9:30 Ary indro, nisy roa lahy niresaka taminy. Ary izao dia Mosesy sy Elia, niseho in voninahitra.
9:31 Dia nilaza ny fialany, izay hahataperan'ny any Jerosalema.
9:32 Na izany aza tena, Petera sy ireo izay niaraka taminy dia vesaran'ny torimaso. Ary lasa fanairana, dia nahita ny fiandrianany sy izy roa lahy izay teo aminy.
9:33 Ary nony fa, toy izao no niala taminy, Hoy Petera tamin'i Jesosy: "Mpampianatra, tsara raha mitoetra eto isika. Ary noho izany, aoka hanao lay telo izahay: ny anankiray ho Anao, ary ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. "Fa tsy fantany izay nolazainy.
9:34 Avy eo, raha mbola niteny izany, dia nisy rahona nanarona azy ireo. Ary raha izao no niditra tao anatin'ny rahona, dia raiki-tahotra.
9:35 Ary nisy feo avy tao amin'ny rahona, nanao hoe:: "Ity no zanako malalako. Henoy izy. "
9:36 Ary raha ny feo rehefa nikotroka, Jesosy hita ho irery. Ary nangina izy ireo ka nilaza tsy misy olona, tamin'izany andro izany, na dia iray akory ireo zavatra ireo, izay efa hitany.
9:38 Ary indro, a man from the crowd cried out, nanao hoe:, "Mpampianatra, Miangavy anao aho, look kindly on my son, for he is my only son.
9:39 Ary indro, a spirit takes hold of him, and he suddenly cries out, and it throws him down and convulses him, so that he foams. And though it tears him apart, it leaves him only with difficulty.
9:40 Ary niteny tamin'ny mpianatrao aho mba hamoaka izany, and they were unable.”
9:41 Ary ho setrin'ny, Hoy i Jesosy: “O unfaithful and perverse generation! How long will I be with you and endure you? Bring your son here.”
9:43 Ary Jesosy niteny mafy ny fanahy maloto, ka nahasitrana ny zazalahy, ary dia naveriny teo aminy ho any an-drainy.
9:44 Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben'ny Andriamanitra. Ary dia manontany tena toy ny olon-drehetra ny zavatra rehetra izay nataony, hoy izy tamin'ny mpianany: "Tsy maintsy hametraka izany teny izany ao am-ponareo. Fa ho fa ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-tànan'ny olona. "
9:45 Nefa tsy hahalala izao teny, ary nisy nafenina azy, ka izy ireo dia tsy ho fantany. Ka dia natahotra ny hanontany azy izy mikasika izany teny izany.
9:46 Ary hevitra niditra tao aminy, tahaka ny amin'izay anankiray aminy dia lehibe kokoa.
9:47 Fa Jesosy, nahalala ny hevitry ny fony, dia nandray zaza anankiray ka nijanona azy afa-tsy izy.
9:48 Ary hoy Izy taminy:: "Na zovy na zovy no mandray io zaza io noho ny anarako, dia mandray Ahy; ary izay mandray ahy, dia mandray Izay naniraka Ahy. Fa na iza na iza no kely indrindra ao aminareo rehetra, dia izy no lehibe. "
9:49 Sy ny fandraisana andraikitra, Jaona nanao hoe:: "Mpampianatra, izahay nahita anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao. Ary voarara azy, satria tsy manaraka antsika. "
9:50 Ary hoy Jesosy taminy:: "Aza mandrara azy. Fa izay tsy manohitra anareo, dia ho anareo. "
9:51 Ary nitranga fa, raha ny andro ny fanaranam-po dia ho vita, dia naharitra nizotra hankany Jerosalema.
9:52 Ary nandefa iraka hialoha Azy Izy. Ary raha mbola teo, dia niditra tao an-tanànan'ny Samaritana,, mba hiomanana ho azy.
9:53 Ary izy ireo tsy nandray azy, satria nandroso handeha hankany Jerosalema.
9:54 Ary rehefa ny mpianatra, Jakoba sy Jaona, efa nahita izany, hoy izy ireo, "Tompo ô, no tianao mba hiantso ho amin'ny afo ny hidina avy any an-danitra handevona azy?"
9:55 ary nitodika, dia niteny mafy azy ireo, nanao hoe:: "Sa tsy fantatrareo ny fanahiny ianao?
9:56 Ny Zanak'olona tsy tonga, tsy handrava fiainana, fa hamonjy azy ireo. "Dia niditra tao amin'ny tanàna hafa.
9:57 Ary nony fa, raha mbola nandeha teny an-dalana, nisy olona nanao taminy hoe, "Hanaraka anao aho, na aiza na aiza no halehanao. "
9:58 Fa hoy Jesosy taminy: "Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana fialofana. Fa ny Zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahan'ny lohany. "
9:59 Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, "Manaraha Ahy." Fa hoy, "Tompo ô, avelao aho aloha handeha handevina ny raiko. "
9:60 Ary hoy Jesosy taminy:: "Aoka ny maty handevina ny maty. Fa ianao kosa mandehana ka hitory ny fanjakan'Andriamanitra. "
9:61 Hoy ny iray:: "Hanaraka anao aho, Tompo. Fa aoka aho aloha manazava izany ho an'ireo ao an-tranoko. "
9:62 Fa hoy Jesosy taminy, "Tsy misy olona mametraka ny tanany amin'ny angadin'omby ho, ary avy eo dia toa indray, miendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. "